Jowhar.com : Somali Leader News - News: Wasiirada Arrimaha Gudaha iyo Amniga oo loo qabtay in muddo 15-cisho gudahood ku hor-yimaadaan Baarlamaanka
April 24 2014 22:47:20
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalmo ka hor u gudbiyay Gudoonka mooshin lagu dalbanayo in Wasiirka Arrimaha Gudaha C/llaahi Goodax Barre iyo Wasiirka Amniga Qaranka C/kariin Xuseen Guuleed inay ku hor-yimaadaan Baarlamaanka.
Gudoomiye kuxigeenka labaad ee Baarlamaanka Mahad Axmed Cawad oo aqrinayay qaraar uu Baarlamaanka ka qaatay dilkii Odayaasha dhaqanka ee loogu geystay duleedka Buur-Hakaba ayaa ka dalbaday Xukuumada inay guddi baari ay u soo saarto weerarkaas lagu laayay ilaa sideeda odayaasha dhaqameedka ahaa.
Sidoo kale waxaa uu cambaareeyay falkaas waxashnimada ah, isagoo xusay in gudiga deg deg ah ee loo saarayo falkaas inay baaritaan sax ah ku soo sameyaan, isla markaana Baarlamaanka la hor keeno xog dhab ah.
Wasiirada loo yeeray ayaa laga doonayaa in wax laga weydiiyo nabadgelyada dalka iyo halka ay marayaan howl galada ka socda gobolada, iyadoo Xildhibaanada Baarlamaanka ay su'aalo adag weydiinayaan wasiirada arrimaha gudaha iyo Amniga.
Gudoonka Baarlamaanka ayaa sheegay in howl fara badan ay u taalo sanadkan oo ay ugu weyn tahay arrimaha dib u habeynta dastuurka, federaalka iyo howlaha amniga dalka, iyadoo Baarlamaanka bilaabi doono la xisaabtan dhab ah.
mahad on April 03 2014
Jowhar.com751,639 unique visits